आज एकाएक बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ? - सिम्रिक खबर
आज एकाएक बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । गत हप्ताबाट लगातार घटिरहेको सुनको भाउ आज मंगलबार भने बढेको छ। आज सुनको भाउ तोलामा ९०० रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला छापावाला सुन ९४ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ९३ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ। यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार तोलामा ६०० रुपैयाँले घटेको सुनको भाउ सोमबार भने स्थिर रहेको थियो। भाउमा आएको गिरावटसँगै आइतबार प्रतितोला फाइन गोल्ड ९३ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९२ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा २५ रुपैयाँको बढोत्तरी भएको छ। योसँगै आज प्रतितोला चाँदी १ हजार १७५ रुपैयाँ कायम भएको छ। गत आइतबार तोलामा १० रुपैयाँ घटेर १ हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ सोमबार भने स्थिर रहेको थियो। गत साताभरि चाँदीको भाउ पनि तोलामै १७० रुपैयाँको गिरावट आएको थियो।